Home » Wakhti kasta oo Jimicsi ah » Franklin, WI Wakhtiga Xilliga Jimcaha 7 Maalinta Jimicsiga Bilaashka ah
Franklin, WI Wakhti kasta oo Fudud oo Bilaash ah BILOW
Markasta oo Fiyuus ah ee Franklin, WI waxay bixisaa kaarka 7 maalin walba si ay u tijaabiyaan jimicsigooda. Riix Halkan si aad u hesho jimicsiga bilaashka ah.
Shuruudaha Lacag Bixin la'aan
Macaamiisha cusub kaliya. Dhererka tijaabada ah sida caadiga ah 7 maalmood. Meelaha kaqaybgalayaasha oo kaliya. Shuruudaha iyo xaaladaha way kala duwanaan karaan. Goob kasta oo madax bannaani leh ayaa leh oo loo adeegsadaa.
Sii wanaagsan Franklin, WI kooxda
Raadinta martiqaadka martida si kale duwan Mar kasta oo Jimicsi jimicsi ah? Booqasho http://www.anytimefitness.com/membership/gym-pass